मोदीले क्यामेरा देखेपछि रोएको नाटक गरेका हुन् ? - Sidha News
मोदीले क्यामेरा देखेपछि रोएको नाटक गरेका हुन् ?
काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इसरो प्रमुख के सिवनलाई आफ्नो अँगालोमा लिएर थपथपाएको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
जब भारतले चन्द्रमामा पठाएको चन्द्रयानको एउटा अंग ‘विक्रम ल्याण्डर’ सम्पर्कबिहीन भयो, त्यतिबेला मोदीले उक्त मिसन प्रमुख सिवनलाई आफ्नो अंगालोमा लिएर शान्त्वना दिएका थिए । यसबीचमा दुवैले आँशु पनि झारे ।
२७ सेकेण्डको यो भिडियो इन्टरनेटमा लाखौँ पटक हेरिएको छ । मोदीका आलोचकहरूले यस भिडियोलाई मोदीको ‘नाटक’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूको दाबी छ, जब मोदीले नजिकै क्यामेरा देखे, तब सिवनलाई ग्वाम्मै अँगालो हालेर रुन थाले ।
सामाजिक सञ्जालमा यही कारणले मोदीको आलोचना बढिरहेको देखिन्छ । जब मोदीलाई थाहा भयो त्यहाँ नजिकै क्यामेरा छ, त्यसपछि कपडा फेरेर आए अनि सिवनलाई अँगालो हालेर रुन थाले । तर बीबीसी इन्डियाले भिडियोको पहिलो भाग र दोस्रो भागको बीचमा धेरै नै समय रहेको पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ ।
त्यसपछि मोदी उठेर सिवनलाई अँगालो हाले । अनि रुन शुरू गरे । प्रधानमन्त्री मोदीका आलोचकहरूले यस्तो धेरै पटक भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार जब मोदीले वरिपरी क्यामेरा रहेको थाहा पाउँछन्, तब हाउभाउ नै अर्कै देखाउन शुरू गर्छन् । तर शुक्रवारको यो घटनामा भने मोदीले ‘नाटक’ नगरेको बीबीसीले बताएको छ ।